इटोडोलैक बनाम आईबुप्रोफेन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी कम्पनी, समाचार समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी प्रेस औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर मनोरञ्जन कम्पनी, चेकआउट खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार, कल्याण समाचार
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> इटोडोलैक बनाम आईबुप्रोफेन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो
कसैलाई पनि लामो समय अवधिमा असुविधा वा पीडाको साथ बाँच्न चाहँदैन, वा सबैमा त्यो कुराको लागि। भाग्यवस, प्रिस्क्रिप्शन र ओभर-द-काउन्टर दुबई राहत तपाईको नजिकको औषधि पसलमा पहुँच योग्य छ। जबकि तिनीहरू ओपिओइड दर्द निवारकहरू जत्तिकै कडा छैनन्, जसलाई थप गहन चिकित्सा मूल्यांकन र प्रिस्क्रिप्शनको आवश्यकता पर्दछ, एटोडोलक वा आईबुप्रोफेन जस्ता एनएसएआईडीहरू हल्का देखि मध्यम दुखाइको उपचारको लागि प्रभावकारी छन्।
अन्यथा nonsteroidal विरोधी भड़काऊ ड्रग्स को रूप मा परिचित, NSAID ले प्रोस्टाग्लैन्डिनको उत्पादन रोक्न काम गर्दछ। तपाईंको शरीरले प्रोस्टाग्लैन्डिनहरू उत्पादन गरेर केहि चिकित्सा अवस्थाहरूमा प्रतिक्रिया दिन सक्छ, जुन दुखाइ, सूजन, र ज्वरोका लागि जिम्मेवार रसायन हो। NSAIDs ले प्रस्टैग्लैण्डिन उत्पादन एन्जाइमहरू रोक्छ — COX-1 र COX-2 the शरीरको भड़काऊ प्रतिक्रिया नियन्त्रण गर्न र दुखाई कम गर्न।
इटोडोलैक र आइबुप्रोफेनलाई NSAIDs को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। यद्यपि उनीहरूसँग केही महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू छन्।
इटोडोलक र आइबुप्रोफेन बीचको मुख्य भिन्नता के हुन्?
Etodolac कहिलेकाँही यसको (अब बन्द) ब्रान्ड नाम, लोडाइन द्वारा पनि चिनिन्छ। यो जेनेरिक औषधिको रूपमा उपलब्ध छ र डाक्टरको पर्ची मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ।
इटोडोलाकको करिब six देखि सात घण्टाको आधा जीवन हुन्छ र रगतमा चोला एकाग्रतामा एकदेखि दुई घण्टा पछि यो पुग्छ। यो गठियाको दुखाइको लागि दैनिक दुईदेखि तीन पटक लिन्छ। त्यहाँ एक इटोडोलैक विस्तारित रिलिज ट्याब्लेट पनि छ जुन करिब आठ घण्टा लामो आधा जीवन हुन्छ र दैनिक एक पटक लिन सकिन्छ।
Ibuprofen अधिक सामान्य NSAID हो जुन ओभर-द-काउन्टर (OTC) उपलब्ध छ। आईबुप्रोफेनको उच्च शक्तिहरू पनि डाक्टरको प्रिस्क्रिप्शनमा उपलब्ध छन्। इबुप्रोफेनको लोकप्रिय ब्रान्ड नामहरूमा एडभिल, मोट्रिन, र मिडोल सामेल छन्।
जब तापमान ज्वरो मानिन्छ
इबुप्रोफेनले एकदेखि दुई घण्टा भित्र पछाडि रगतको स्तरमा पुग्छ। यद्यपि, एटोडोलाक विपरीत, आईबुप्रोफेनको वरपर छोटो आधा जीवन हुन्छ दुई घण्टा । प्रिस्क्रिप्शन-सामर्थ्य आईपुप्रोफेन ट्याब्लेटमा आउँदछ जुन दैनिक रूपमा तीन देखि चार पटक लिन्छ। ओटीसी संस्करण मौखिक ट्याब्लेट, क्याप्सूल, र तरल निलम्बनहरूमा आउँदछ।
एटोडोलक र आईबुप्रोफेन बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ ड्रग्स (NSAID) Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ ड्रग्स (NSAID)
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति सामान्य उपलब्ध (ब्रान्ड बन्द) ब्रान्ड र जेनेरिक उपलब्ध
ब्रान्ड नाम के हो? Lodine एडभिल, मोट्रिन, मिडोल
मौखिक ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज मौखिक क्याप्सूल
मानक खुराक के हो? दुखाइको लागि: २०० to देखि mg०० मिग्रा प्रत्येक to देखि hours घण्टा आवश्यकता अनुसार। प्रति दिन १२०० मिलीग्रामको अधिकतम खुराक नलगाउनुहोस्।
ओस्टियोआर्थराइटिस वा रुमेटीस गठियाको लागि: तत्काल रिलीज 300०० मिलीग्राम दैनिक दुई वा तीन पटक वा to०० देखि mg०० मिलीग्राम दैनिक दुई पटक। प्रति दिन once०० देखि १००० मिलीग्राम विस्तारित-रिलीज। प्रति दिन १२०० मिलीग्रामको अधिकतम खुराक नलगाउनुहोस्। दुखाइको लागि: २०० to देखि mg०० मिलीग्राम प्रत्येक to देखि hours घण्टा आवश्यकता अनुसार। एक चिकित्सक द्वारा निर्देशित नगरेसम्म प्रति दिन 1200 मिलीग्राम को अधिकतम खुराक भन्दा बढी नगर्नुहोस्।
ओस्टियोआर्थराइटिस वा संधिशोथका लागि: to०० देखि mg०० मिलीग्राम तीनदेखि चार पटक दैनिक। प्रति दिन 00२०० मिलीग्रामको अधिकतम खुराक नलगाउनुहोस्।
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? उपचार अवधि स्वास्थ्य अवस्था, पीडाको गंभीरता, र अन्य कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। उपचार छोटो अवधि वा लामो-अवधि हुन सक्छ। उपचार अवधि स्वास्थ्य अवस्था, पीडाको गंभीरता, र अन्य कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। उपचार छोटो अवधि वा लामो-अवधि हुन सक्छ।
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र children बर्ष र माथिका बच्चाहरु वयस्क र बच्चाहरु months महिना र माथिका
एटोडोलाक र आइबुप्रोफेनद्वारा उपचारित सर्तहरू
इटोडोलाक र आइबुप्रोफेन दुखाईको उपचारको लागि लेबल गरिएका छन्। तिनीहरू सामान्य दन्त प्रक्रियाहरूबाट हल्का देखि मध्यम तीव्र दुखाइको उपचार गर्नका लागि लगिएका छन्, माइग्रेनहरू , वा मांसपेशियों को दर्द (मायाल्जिया)।
इटोडोलाक र आइबुप्रोफेन विशेष गरी उपयोगी छन् र एफडीए ओस्टियोआर्थराइटिस र संधिशोथबाट पीडा र सूजनको उपचारको लागि अनुमोदित छ। जोर्नीशोथसँग जोडिएको अधिक गम्भीर दुखाइ वा हड्डीको दुखाइलाई सम्बोधन गर्न प्राय: उच्च शक्ति आवश्यक हुन्छ। केहि केसहरूमा सिफारिश गरिएको उमेर सीमा भन्दा माथि बच्चाहरु लाई यी NSAID को साथ पनि उपचार गर्न सकिन्छ किशोर idiopathic गठिया ।
ओभर-द-काउन्टर आईबुप्रोफेनलाई ज्वरो र मासिक धर्म क्रम्प्स (प्राथमिक डिसमेनोरिया) को उपचारको लागि लेबल गरिएको छ। नियोप्रोफेन भनिने आईबुप्रोफेनको एक इन्जेक्टेबल रूप पेटन्ट डक्टस धमनी धमनी (पीडीए), एक प्रकारको हृदय दोष, समयपूर्व शिशुहरूमा उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
सर्त इटोडोलाक इबुप्रोफेन
ओस्टियोआर्थराइटिस हो हो
किशोर इडिओपाथिक गठिया हो हो
ज्वरो हैन हो
प्राथमिक डिसमेनोरिया हैन हो
प्याटेन्ट डक्टस धमनी हैन हो
के एटोडोलक वा आइबुप्रोफेन बढी प्रभावकारी छ?
दुबै एटोडोलाक र इबुप्रोफेन दुखाइ कम गर्ने प्रभावकारी NSAID हरू हुन्। उनीहरू दुवैले साइक्लोक्सीजेनेस (COX) एंजाइमहरूलाई रोक्दछन् सूजन नियन्त्रण गर्न र जोर्नीशोथ भएकाहरूमा दुखाइ कम गर्दछ। यद्यपि इटोडोलकको प्रभावहरू थोरै लामो समय सम्म रहन्छ। तसर्थ, केहि व्यक्तिहरूले यसको कम-फ्रिक्वेन्सी डोजको लागि इटोडोलक रुचाउँछन्।
एक दोहोरो अन्धा अध्ययन etodolac र ibuprofen तुलना गर्दै रुमेटीइड गठियाका १,44 .6 बिरामीहरूलाई या त १ 150० मिलीग्राम एटोडोलैक दैनिक दुई पटक, 500०० मिलीग्राम एटोडोलक दिनको दुई पटक, वा mg०० मिग्रा इबुप्रोफेन दैनिक चार पटक दिइयो। एटोडोलकको दुबै खुराकहरू आईपुप्रोफेन खुराकको प्रभावकारितामा समान पाइएको थियो। साइड इफेक्टको मामलामा, एटोडोलक लिनेहरूले अपच, दाना र पेट ब्लीडिंग अनुभव गरे आईबुप्रोफेन लिनेहरू भन्दा। जे होस्, यो औषधि बिरामीहरूलाई दिइएको मात्रासँग सम्बन्धित हुन सक्छ।
जबकि कुनै अन्य क्लिनिकल परीक्षणहरूले ईटोडोलाक र आईबुप्रोफेनलाई सीधा तुलना गरेनन्, विभिन्न अध्ययनहरूले अन्य एनएसएआईडीहरूलाई एटोडोलाक वा आईबुप्रोफेनसँग तुलना गरे। एउटा मेटा-विश्लेषण फेला पर्‍यो कि डिक्लोफेनाकको अधिकतम दैनिक खुराक आईबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, र सेलेक्सोक्सीबको अधिकतम दैनिक खुराक भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ (तर सबैभन्दा कम एनएसएआईडीको कम खुराक सिफारिश गरिन्छ)। अर्को मेटा-विश्लेषणले पत्ता लगायो कि निश्चित NSAIDs जस्तै piroxicam र azapropazone विषाक्तताको उच्च जोखिम छ जबकि कम-खुराक आईबुप्रोफेनसँग विषाक्तताको कम जोखिम हुन्छ। समग्रमा, यो भन्न सकिन्छ कि NSAIDs प्रभावकारिता भन्दा सुरक्षा मा बढी फरक हुन्छन्।
दुखाई को विकल्प को विस्तृत एर्रे को कारण, उत्तम उपचार विकल्प को लागी एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग परामर्श गर्न महत्वपूर्ण छ। एक डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु विशिष्ट चिकित्सा अवस्था को लागी उचित चिकित्सा सल्लाह प्रदान गर्न सक्दछ।
कभरेज र इटोडोलक बनाम आईबुप्रोफेनको लागत तुलना
जेनेरिक एटोडोलैक ट्याब्लेटहरू प्रायः मेडिकेयर र बीमा योजनाहरू द्वारा आच्छादित हुन्छन्। यदि तपाईंसँग जोर्नीशोथ जस्तो चिकित्सा सर्तहरू छन् भने, बीमा योजनाहरूले पीडाको लागि एटोडोलाक समाहित गर्दछ। एटोडोलकको औसत खुद्रा लागत डोजमा निर्भर हुन सक्छ, तर तपाईं सहभागी फार्मेसीहरूमा एकलकेयर कूपनको प्रयोग गरेर इटोडोलैकको लागि around $० तिर्न सक्नुहुनेछ।
किनकि आईबुप्रोफेन ओभर-द-काउन्टर उपलब्ध छ, केही फारमहरू बीमा योजनाहरू द्वारा कभर नहुन सक्छ। यद्यपि, प्रायः मेडिकेयर पार्ट डी र बीमा योजनाहरूले उपचार विधिमा निर्भर पर्चेको-शक्ति आईबुप्रोफेन ट्याब्लेटहरू ढाक्नु पर्छ। सामान्यतया, इबुप्रोफेन ईटोडोलक भन्दा बढी किफायती हुन्छ। आइबुप्रोफेनको लागि एकलकेयर कूपन प्रयोग गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट प्रिस्क्रिप्शन छ।
सामान्यतया बीमा द्वारा कभर? हो हो (प्रिस्क्रिप्शन-शक्ति ट्याब्लेटहरू)
मानक खुराक Mg०० मिलीग्राम २ देखि times पटक दैनिक To०० देखि mg०० मिलीग्राम दैनिक to देखि times पटक
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 0– $ 76 $ 0– $ 22
एकलकेयर लागत $ 40– $ 80 $ 4– $ 24
इटोडोलैक बनाम आइबुप्रोफेनको साझा साइड इफेक्टहरू
एटोडोलक र आइबुप्रोफेन सहित NSAID को सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्ट भनेको मतली, अपच (dyspepsia), कब्ज, पखाला, र पेट वा पेट दुखाइ हो। गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल साइड इफेक्ट बाहेक, NSAIDs पनि चक्कर आउन सक्छ, हात वा खुट्टा मा सूजन (edema), टाउको दुख्ने, पुराना र कानमा घन्टी (टिनिटस) हुन सक्छ। एटोडोलाक र आईबुप्रोफेनको अधिकतर साइड इफेक्टहरू हल्का छन् र आफ्नै रूपमा जानुहोस्।
NSAID को गम्भीर साइड इफेक्टले एलर्जी प्रतिक्रियाहरू समावेश गर्न सक्छ, जस्तै गम्भीर दाग वा एनाफिलक्सिस, सक्रिय वा निष्क्रिय अवयवहरूबाट। अन्य गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा पेटको रक्तस्राव र पेप्टिक अल्सर । यदि तपाई मलमा रगत, वजन घटाउने, वा पेटको गम्भीर दुखाई अनुभव गर्नुहुन्छ भने तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
मतली हो १% –१०% हो १% ––%
पेट दुख्ने हो १% –१०% हो १% ––%
अपच हो १% –१०% हो १% ––%
कब्ज हो १% –१०% हो १% ––%
पखाला हो १% –१०% हो १% ––%
चक्कर हो १% –१०% हो १% ––%
इडेमा हो १% –१०% हो १% ––%
टाउको दुखाई हो १% –१०% हो १% ––%
पुराना हो १% –१०% हो १% ––%
टिन्निटस हो १% –१०% हो १% ––%
स्रोत: डेलीमेड ( इटोडोलाक ), डेलीमेड ( इबुप्रोफेन )
इटोडोलैक बनाम आइबुप्रोफेनको ड्रग अन्तर्क्रिया
किनभने उनीहरूले COX-1 एन्जाइम रोक्दछन्, जसले प्लेटलेट उत्पादन र रगतको क्लोटमा भूमिका खेल्छ, NSAID ले रगत पातलोको प्रभावमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ। एनएसएआईडीले एन्सरप्लेटलेट एजेन्टहरू जस्तै एस्पिरिन र एन्टिकोआगुलन्टहरू वारफेरिनबाट रक्तस्रावको जोखिम बढाउन सक्छ।
इटोडोलाक र आइबुप्रोफेनले शरीरलाई तरल पदार्थ कायम राख्न र मिर्गौलाको कार्यलाई असर गर्न सक्छ। परिणाम स्वरूप, यी NSAIDs रक्तचाप बढाउन सक्छ। यदि तपाइँ उच्च रक्तचाप (एन्टिहाइपरप्टेन्सिभ) औषधि लिईरहनु भएको छ, जस्तै लिजिनोप्रिल वा लोसार्टन, तपाइँको रक्तचाप एक NSAID लिदा निगरानी गर्न पर्ने हुन सक्छ।
इटोडोलाक र आइबुप्रोफेनले शरीरबाट साइक्लोस्पोरिन, डिजोक्सिन, वा मेथोट्रेक्सेट कसरी खाली गरिन्छ भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ। NSAID लिँदा साइक्लोस्पोरिन, डिजोक्सिन, वा मेथोट्रेक्सेट विषाक्तताको बढि जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
अन्य सम्भावित ड्रग अन्तर्क्रिया तल फेला पार्नुहोस्।
भिटामिन डी d2 र d3 बीच के फरक छ?
औषधि औषधि वर्ग इटोडोलाक इबुप्रोफेन
एस्पिरिन Antiplatelet हो हो
रामीप्रील Angiotensin रूपान्तरण एंजाइम (ACE) अवरोधकर्ता हो हो
ओल्मेसारन Angiotensin रिसेप्टर अवरोधक (एआरबी) हो हो
हाइड्रोक्लोरोथियासाइड मूत्रवर्धक हो हो
लिथियम मूड स्टेबलाइजर हो हो
पेमेट्रेक्सेड अनटाइमेटोबोलिट हो हो
साइक्लोस्पोरिन इम्युनोसप्रेसन्ट हो हो
इटोडोलक र आइबुप्रोफेनको चेतावनी
इटोडोलाक र आइबुप्रोफेन, अन्य NSAIDs जस्तै, हृदयघात र स्ट्रोक जस्तै गम्भीर कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक घटनाहरूको जोखिम बढाउन सक्छ। NSAID को उपयोगलाई बेवास्ता गर्न वा अनुगमन गरिएको हुनु पर्छ हृदय सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै मुटुको असफलता, मुटु रोग, र उच्च रक्तचाप।
इटोडोलैक वा आइबुप्रोफेनको प्रयोगले गम्भीर जठरांत्र (जीआई) प्रतिकूल घटनाहरूको बढि जोखिम निम्त्याउन सक्छ, जस्तै पेटमा रक्तस्राव र पेप्टिक अल्सर। उचित उपचार बिना, सूजन, र GI पथमा रक्तस्राव घातक हुन सक्छ। ठूला मानिसहरूसँग गम्भीर जीआई प्रतिकूल घटनाहरूको उच्च जोखिम हुन सक्छ।
NSAIDs एक हृदय प्रक्रिया बोलाउनु भन्दा ठीक अघि वा पछि प्रयोग गर्नु हुँदैन कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्ट (CABG) सर्जरी ।
NSAID लिने बेलामा मृगौला रोगसँग पीडित कोहि पनि अर्को किडनी समस्या हुने खतरा हुन सक्छ।
NSAID लिनु अघि अन्य सावधानीहरूको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
इटोडोलैक बनाम आइबुप्रोफेनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
इटोडोलक भनेको के हो?
Etodolac एक nonsteroidal विरोधी भड़काऊ औषधि हो (NSAID) दुखाई र जलन को उपचार गर्न प्रयोग। वयस्कहरूमा ओस्टियोआर्थराइटिस र संधिशोथको उपचारको लागि एफडीए अनुमोदित हुन्छ। जेनेरिक ईटोडोलैक केवल एक पर्चेको साथ प्राप्त गर्न सकिन्छ।
इबुप्रोफेन सामान्य रूपमा एडवल र मोट्रिन जस्ता ब्रान्ड नामहरू द्वारा परिचित छन्। यो ओभर-द-काउन्टर हल्का देखि मध्यम दुखाइ, ज्वरो, र मासिक पेटका उपचारको लागि उपलब्ध छ। उच्च शक्ति इबुप्रोफेन ओस्टीओआर्थराइटिस र संधिशोथबाट पीडा र सूजनको उपचारको लागि एक नुस्खाको साथ प्राप्त गर्न सकिन्छ।
के एटोडोलैक र आईबुप्रोफेन एकै छ?
इटोडोलाक र आइबुप्रोफेन उस्तै छैन। जबकि ती दुबै एनएसएआईडीहरू हुन्, उनीहरूसँग खुराक र कसरी प्रयोग गरिएकोमा फरक छ। Etodolac एक औषधी हो जुन गठियाको साथ वयस्कहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। इबुप्रोफेन हल्का दुखाइ र ज्वरोको लागि ओभर-द-काउन्टर औषधिको रूपमा अधिक पहुँचयोग्य छ।
के एटोडोलक वा आइबुप्रोफेन राम्रो छ?
राम्रो एनएसएआईडी तपाईले लिने डोजमा र तपाईले के लिदै हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। इबुप्रोफेनको तुलनामा, इटोडोलाक शरीरमा लामो समय सम्म रहन्छ, र यसैले, यो दिनभर कम समय लिन सकिन्छ। यद्यपि यो आईबुप्रोफेन भन्दा धेरै महँगो पर्दछ। तपाईंको समग्र अवस्थाको आधारमा, तपाईंको डाक्टरले एक अर्कामा सिफारिश गर्न सक्दछ।
के म गर्भवती हुँदा इटोडोलैक वा आईबुप्रोफेन प्रयोग गर्न सक्छु?
इटोडोलाक र आइबुप्रोफेन सामान्यतया गर्भावस्थामा सिफारिस गरिदैन। गर्भावस्थाको अवधिमा एनएसएआईडीको प्रयोग जन्म दोष वा गर्भपातको जोखिमसँग जोडिएको छ, विशेष गरी पछि गर्भावस्थामा। यदि तपाई विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस् गर्भवती हुँदा उपचार विकल्पहरू ।
के म रक्सीको साथ एटोडोलक वा आईबुप्रोफेन प्रयोग गर्न सक्छु?
NSAID लिइरहेको बेला न्यूनतम मदिराको सेवन अवसरमा ठीक हुन सक्छ। यद्यपि अत्यधिक मात्रामा रक्सी पिउँदा NSAIDs का साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रतिकूल प्रभावहरूको बढि जोखिम निम्त्याउन सक्छ। रक्सी र NSAIDs पेट र आन्द्रा अस्तर चिढचिढ्याउन सक्छ, जो अल्सर वा रक्तस्राव हुन सक्छ।
के एटोडोलैक एक दर्द हत्यारा हो?
इटोडोलाक एक प्रभावकारी पेन किलर हो। यो गठियाको कारणले भएको दुखाई र सूजनको उपचारको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी छ। यो दाँतको शल्यक्रिया जस्ता केही प्रक्रियाहरू पछि तीव्र पीडाको उपचारको लागि पनि उपयोगी छ।
के एटोडोलैक नेप्रोक्सेन भन्दा मजबूत छ?
NSAIDs को प्रभावकारिता अन्य कारकहरु बीच लिइएको खुराकमा निर्भर गर्दछ। सबै चीजहरू बराबर हुनु, एटोडोलक र नेप्रोक्सेन प्रभावकारताको सन्दर्भमा तुलनात्मक हुन्छन्। डबल ब्लाइन्ड अध्ययनको अनुसार, एटोडोलाक र नेप्रोक्सेन हुन् समान प्रभावकारी संधिशोथको उपचारको लागि। दुबै औषधिहरू साइड इफेक्टको हिसाबले राम्रोसँग सहन पनि गरिन्छ।
रगत पातलो गर्दा रक्सी पिउन सुरक्षित छ?
फ्लू को प्रकार को वरिपरि जान्छ
Tamiflu लाई काम गर्न कती समय लाग्छ?
रुघाखोकी लाग्दा के खानु हुँदैन?
xiidra आँखा ड्रप को साइड इफेक्ट के हो
के खतरनाक उच्च रक्त शर्करा को स्तर हो
रक्त ग्लुकोज मीटर कुनै परीक्षण स्ट्रिप्स आवश्यक छैन